बेइजिङमा के भयो त्यस्तो ? जसकारण एकाएक फेरी बढ्यो संक्रमितको संख्या — Imandarmedia.com
२Tao Geoghegan Hart: Giro d’Italia winner ‘leads new generation’ – Sir Dave Brailsford
३Covid: Italy brings in sweeping new coronavirus measures
६अमेरिकी विदेशमन्त्री पम्पियोद्वारा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको भ्रमण शुरु
७विश्वभर ४ लाखभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण
८दशैंकाे दिन नेपालीहरुका लागि आयो अहिलेसम्मकै दुखद खबर, अब के गर्ला ओली सरकार ?
९सामाजिक दूरी कायम गरी दसैं मनाउन राष्ट्रपतिको आह्वान
१२खानुहाेस् यी ५ कुरा, दशैँको खानपानले स्वास्थ्यमा समस्या देखिए
१०राष्ट्रपतिलाई नै कोरोना संक्रमण भएको खुलासा, सचिवालयले दियो यस्तो जानकारी
बेइजिङमा के भयो त्यस्तो ? जसकारण एकाएक फेरी बढ्यो संक्रमितको संख्या
बेइजिङ । चीनमा पछिल्लो दुई दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा चीनमा थप ४९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । त्यसमध्ये राजधानी बेइजिङमा मात्रै ३६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो ।
यसअघि ५० दिनभन्दा लामो समयसम्म यो सहरमा कुनै पनि संक्रमित फेला परेका थिएनन् । बेइजिङमा पछिल्लो समय देखिएका अधिकांश संक्रमित सहरको सबैभन्दा ठूलो होलसेल बजारसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ ।
सिन्फाडी मार्केटबाट मात्र अहिलेसम्म ७९ संक्रमित फेला परेको ग्लोबल टाइम्सले बताएको छ । त्यस्तै, लियाओनिङ, हपेई र सिचुवान प्रान्तमा पनि बेइजिङबाट फर्किएका मानिसहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री सुन चुनलाङले मुलुकमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि निर्णायक कदम चालिने बताएकी छिन्। साथै उनले आगामी दिनमा चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिएकी छिन् ।
यसअघि बिहीबार बेइजिङमा एक संक्रमित फेला परेका थिए भने त्यसको भोलिपल्ट ६ संक्रमित फेला परेका थिए । नयाँ संक्रमित भेटिएसँगै सिज्फाडी मार्केट र त्यसको आसपासका ११ क्षेत्रमा लकडाउन घोषणा गरिएको थियो । सोमबार थप १० क्षेत्रमा लकडाउनको घोषणा गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।
साथै, यो बजारका १० हजार कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिने भएको छ । पछिल्लो समय चीनको अन्य भागको जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहेको अवस्थामा बेइजिङमा नयाँ संक्रमित भेटिन सुरु गरेका हुन् । बीबीसी
यता नेपालमा सोमबार थप ४५१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६ हजार २११ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित लाइभ अपडेटमा नेपालमा हालसम्म ६ हजार २११ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो ।
यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा धादिङका ९ जना पुरुष र काठमाडौंका एकजना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । पाटन अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ललितपुरको एकजना महिला र काठमाडौंका दुई जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
अमेरिकी अस्पतालमा कोभिड-१९ को उपचार खर्च ११ लाख अमेरिकी डलर पनि पर्यो होला भन्ने हामी जोसुकैले अनुमान लगाउन सक्दैनौँ । तर संयुक्तराज्य अमेरिकामा एक ७० वर्षीय वृद्धले अस्पतालमा कोभिड-१९को उपचार गराएबापत ११ लाख डलरको बिलमा सही गर्नु परेको सियाटल टाइम्सले जनाएको छ ।
समाचार अनुसार गत मार्च ४ मा माइकल फ्लोर नामका वृद्धलाई कोभिड-१९ को उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेका फ्लोरलाई त्यस अस्पतालमा ६२ दिन राखिएको थियो । एक पटक उनको अवस्था अति नाजूक भएको थियो । अस्पतालका नर्सहरुले ती वृद्धकी पत्नी र छोराछोरीलाई फोन समेत गरेर अवस्था नाजूक भएको जानकारी गराएका थिए ।
तर उपचार बापत फ्लोरले एक पैसा तिर्नु परेन । अमेरिकी सरकारले वयोवृद्धका लागि व्यवस्था गरेको बिमा सेवा मेडिकेयरले यो सबै भुक्तानी गरेको छ । मेडिकेयरले सबै रकम भुक्तानी गरे पनि फ्लोर भने यो बिमा सुविधाबाट खुशी छैनन् ।
सियाटल टाइम्ससँग कुरा गर्दै फ्लोरले आफ्नो उपचारमा देखाइएको खर्च वास्तविक नै हो भन्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । उनले आफूजस्ता धेरै व्यक्तिका लागि सरकारले गरेको खर्च आम अमेरिकी करदाताको रकम भएकाले यसप्रति सबै चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रासस
दशैंकाे दिन नेपालीहरुका लागि आयो अहिलेसम्मकै दुखद खबर, अब के गर्ला ओली सरकार ?
आज यति धेरै जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कति जनाको भयो मृत्यु ?